Fitahiana ho an'ny hafa, izao tontolo izao maneran-tany Switzerland Switzerland (WKG)
Tombontsoa lehibe tokony hotadiavintsika rehetra ny fitahiana azy. Fa inona? Tiantsika ny ho voatahy mba ho voamariky ny tenin'Andriamanitra? Mba hahazoana toerana avo kokoa? Ho mankafy ny fomba fiainantsika milamina miaraka amin'ny fitomboan'ny fanambinana sy ny fahasalamana?
Betsaka ny mitady ny fitahianan'Andriamanitra mba hahazoana zavatra iray. Fa manolotra zavatra hafa aho. Rehefa nitahy an'i Abrahama Andriamanitra dia nokasainy ho fitahiana ho an'ny hafa. Ny olona hafa dia tokony handray anjara ihany koa amin'ny tsodrano. Tokony ho fitahiana ho an'ny firenena sy ny kristiana ny fitahiana ho an'ny fianakaviana sy ny fiangonana, ny fiangonana ary ny firenena. Hotahiana isika fa fitahiana.
Rehefa mitondra tsodrano ho an'ny olona iray isika dia miasa avy amin'Andriamanitra satria Andriamanitra mitahy. Raha mitso-drano ny hafa isika, dia hitahy antsika bebe kokoa Andriamanitra mba hahafahantsika manohy hitahy.
Maninona isika no tsy manontany amin'Andriamanitra isan'andro amin'ny fomba ahoana sy amin'ny maha-azoko atao fitahiana anio? Tsy fantatrao mialoha ny dikan'ny hoe fihavanana kely ho an'ny olona iray; fa mitahy azy isika.